China Centella Asiatica wepụ 40% ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị na-eweta ngwaahịa | Shaanxi Green Bio-Injinia
antioxidant ntụ ntụ
ahụike ngwaahịa ihe
White willow ogbugbo PE Salicin 98%
White willow ogbugbo PE Salicin 90%
White willow ogbugbo PE Salicin 25%
Baicalin 95% ntụ ntụ
Baicalin 90% ntụ ntụ
Baicalin 85% ntụ ntụ
Baicalin 80% ntụ ntụ
Baicalin 60% ntụ ntụ
Baicalin 50% ntụ ntụ
Baicalin 40% ntụ ntụ
Centella Asiatica wepụ 95%
Centella Asiatica wepụ 90%
Epimedium wepụ Icariin 20%
Epimedium wepụ Icariin 98% ntụ ntụ
Centella Asiatica wepụ 40%
Asiaticoside bụ triterpene glycoside nke sitere na osisi Centella asiatica, nke a na-ejikarị agwọ ọnya. Ọrụ a bụ nsonaazụ nke mkpali nke njikọta andglycosaminoglycan.
Product aha: Centella Asiatica wepụ Asiaticoside
Qualitykpụrụ ogo: ọkọlọtọ mba
Usoro ule: HPLC
Ọdịdị: wepụ-ọcha ntụ ntụ
Usoro nchekwa: A ga-emechi ngwaahịa ahụ ma chekwaa ya na ebe dị jụụ na nkụ.
Isi mmalite nke mmịpụta: osisi dum
Nkọwa ngwugwu: 1kg / aluminum foil bag, 25kg / Drum ma ọ bụ dịka ndị ahịa chọrọ
Product iwebata:Gotu Kola (Centella asiatica), ahịhịa na-adị kwa afọ nke sitere na mpaghara ebe okpomọkụ, ka ejirila ọgwụgwọ ọtụtụ ọnọdụ ọtụtụ puku afọ na China.Gotu Kola enweghị caffeine, ọ bụghịkwa ihe na-akpali akpali, nke a na-ejikarị agwọ ọnyá, na-emeso ọnọdụ anụ ahụ, melite nghọta doro anya, ma na-emeso veins na erughị ala venous na-adịghị ala ala
Nke gara aga: Baicalin 30% ntụ ntụ
Osote: Epimedium wepụ Icariin 10%
Centella Asiatica wepụ
Centella Asiatica Wepụ ntụ ntụ
Centella Asiatica ntụ ntụ
Ihe oru a choro choputara ihe ndi choro, usoro nnwale, ule ule na akara nke Centella Asiatica wepụ
Ihe choro nke ọkọlọtọ a metụtara na akụrụngwa nke Centella Asiatica wepụ site na nhazi nke extracts.
Nhazi nke akwụkwọ nrụtụ akaUsoro ndị dị na akwụkwọ ndị a na-abụ usoro nke ọrụ teknụzụ a site na ịkọwa ha. Mgbanwe niile na - esote (ewepu errata) ma ọ bụ nyochagharị maka ederede ụbọchị agaghị emetụta Nchọpụta Nka na ụzụ a; Agbanyeghị, a na-agba ndị otu nkwekọrịta nkwekọrịta n'okpuru Iwu Nka na ụzụ a ka ha mụọ nnweta ụdị akwụkwọ kachasị ọhụrụ nke akwụkwọ ndị a. Maka ederede edepụtara, ụdị kachasị dị na nka chọrọ.GB / T 5009.11 Mkpebi nke arsenic zuru ezu na arsenic inorganic na ngwa nriGB / T 5009.12 Mkpebi nke ndu n'ime nriGB / T 5009.15 Mkpebi nke cadmium na nri
GB / T 5009.17 Mkpebi ngụkọta na organic mercury na nri
GB / T 5009.19 Mkpebi nke otutu ahuru nke ogwu na-egbu ogwu na nri
GB 4789.2 Microbiological ule nke nri ọcha - mkpebi siri ike nke ọnụ ọgụgụ nke chịrị
GB 4789.3 Microbiological ule nke nri ọcha - mkpebi siri ike nke coliform bacteria
GB 4789.15 Nleba anya na nri microbiology ule maka ebu na yist
Pharmacopoeia nke ndị mmadụ Republic of China (mbipụta 2015)
Centella Asiatica wepụ Molekụla usoro C48H78O19 Molekụla ibu 959.12
A na-egbute ihe ọkụkụ osisi na oge oyi iji wepu adịghị ọcha na nkụ.
4.2 Ihe mmetuta achọrọ
Mee ihe kwekọrọ na chaatị 1
Chart 1 Ntughari uche
Na Centella Asiatica wepụ isi, ilu na uto.
Akọrọ ntụ ntụ
4.3 Ihe nnọchianya ihe atụ
Kwekọ na chaatị 2 chọrọ
Chart 2 Ihe njirimara
Dị ka akọrọ ntụ ntụ Centella Asiatica wepụ ọcha （g / 100g）
Ihe karịrị 98.0
4.4 Ihe omumu ihe omumu
Kwekọ na chaatị 3 chọrọ
Chart 3 Ngwurugwu ogwu choro
Nkebi nke [80 mesh pass （%）] ≧
Mmiri （%） ≦
Ash ọdịnaya （%） ≦
Dị ka / （mg / kg） ≦
Hexachloro-cyclohexane soprocide （mg / kg） ≦
Huintozene （mg / kg） ≦
4.5 Microbiological egosi
Kwekọ na chaatị 4 chọrọ
Chart 4 Ihe ngosi Microbiological
Ọnụ ọgụgụ niile na-agụ / （cfu / g ≦ ≦
Yist & akpụzi / （cfu / g） ≦
5 Usoro nyocha
5.1 Mgbe ị meghere ihe nlele ahụ, nụ isi ya ma detụ ụtọ ya ozugbo; Tụkwasị na nke ahụ, a na-etinye ego kwesịrị ekwesị nke efere ahụ n'ime efere ọcha iji hụ agba ya na ọdịdị ya, na ịlele ahụ ndị mba ọzọ.
5.2 Nlekọta ahụike chọrọ
5.2.1 Ọcha nke Centella Asiatica wepụ Ekpebiri usoro a dị ka Odide Ntụkwasị A
Emere ule a dika usoro nyocha nke edeputara na Iwu General 0982 (Usoro nke Abụọ) nke Anọ Nkebi nke Pharmacopoeia nke Ndị mmadụ Republic of China (2015).
Emere nnwale ahụ dịka usoro akọwapụtara na General Rule 0832 (usoro nke abụọ) nke akụkụ nke anọ nke Pharmacopoeia nke ndị mmadụ Republic of China (mbipụta 2015).
5.2.4 Ash ọdịnaya
Emere nyocha ahụ dịka usoro akọwapụtara na General Rule 1106 nke akụkụ nke anọ nke Pharmacopoeia nke ndị mmadụ Republic of China (mbipụta 2015)
Mkpokọta arsenic na inorganic arsenic dị na nri kpebiri dịka GB / T 5009.11 method.
Dabere na GB / T 5009.12 maka mkpebi siri ike nke ndu na nri.
Cadmium na nri kpebiri dị ka GB / T 5009.15.
Mkpokọta Mercury na inorganic Mercury na nri kpebisiri ike dịka GB / T 5009.17.
5.2.9 Hexachloro-cyclohexane soprocide Nkume Huintozene
Kpochapụ dika GB / T 5009.19
5.4 Nyocha Bacteriological
5.4.1 Ọnụ ọgụgụ niile
N'ikwekọ na "ụkpụrụ ịdị ọcha nri mba" GB4789.2
5.4.2 Yist & Ebu
N'ikwekọ na "ụkpụrụ ịdị ọcha nri mba" GB4789.15
N'ikwekọ na "ụkpụrụ ịdị ọcha nri mba" GB4789.3
N'ikwekọ na "ụkpụrụ ịdị ọcha nri mba" GB4789.4
N'ikwekọ na "ụkpụrụ nri ọcha mba" GB4789.10
6 Ule ule
Ewere ihe nlele dịka usoro akọwapụtara na Iwu Iwu 0211 nke Akụkụ Anọ nke Pharmacopoeia nke Ndị Republic of China (mbipụta 2015), yana ngwaahịa ndị agwakọtara ma nwee otu ọdịdị na ogo n'ime oke ụfọdụ bụ anwale dị ka otu ogbe.
6.2 Nhazi ọkwa nyocha
6.2.1 Nnyocha nnyefe
Tupu ịhapụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ngalaba nyocha nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe ga-enyocha ngwaahịa ogbe site na ogbe dịka ihe 4.2 ~ 4.5 chọrọ, yana ngwaahịa ndị gafere nyocha ahụ wee nye akwụkwọ ikike dị mma nwere ike ree tupu ịhapụ ụlọ ọrụ ahụ.
6.2.2 Testdị ule
Mee ụdị nyocha dịka isi nke 4. Tdị nyocha ga-eme kwa ọnwa isii ọ bụla n'ọnọdụ ọ bụla n'ime ọnọdụ ndị a:
A) mgbe enwere nnukwu mgbanwe na ngwa;
B) Ndozi nke usoro ihe;
C) Ighaghachi mmepụta mgbe ọ dochiri akụrụngwa ma ọ bụ ịkwụsị mmepụta;
D) E nwere nnukwu ọdịiche dị na nsonaazụ nke nrụpụta ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na ụdị nyocha ikpeazụ.
6.3 Iwu mkpebi
6.3.1 Ọ bụrụ na otu n'ime nsonaazụ nyocha ahụ ezuteghị ihe ndị teknụzụ chọrọ, a ga-ahọrọ ụdị nke okpukpu abụọ site na otu ngwaahịa ahụ maka nyocha ọzọ, nsonaazụ nyocha ga-adịkwa. Ọ bụrụ na a ka nwere otu index erughị eru na reinspection, ogbe nke ngwaahịa a ga-ekpe ikpe dị ka erughị eru.
6.3.2 Ọ bụrụ na ihe ọ bụla dị na oru microbial anaghị emezu ihe ndị teknuzu chọrọ, a ga-ekpe ya ikpe dịka onye na-erughị eru na agaghị enyocha ya.
6.3.3 Mkpebi nke nyocha ụdị bụ otu ihe ahụ nyocha ụlọ ọrụ.
Nkọwa, nkwakọ ngwaahịa, njem na nchekwa
7.1.1 Ogwe nkwakọ ngwaahịa ga-akara: aha aha, ụbọchị nke mmepụta, ọnụọgụ nke mmepụta, nkọwapụta, oke oke, nha nha na ụkpụrụ igbu.
7.1.2 A na-ahụ ọdịnaya nke akara ngosi ahụ nke ọma na akara aha ya.
Ihe nkwakọ ngwaahịa kwesịrị iru ihe achọrọ maka ịdị ọcha nri. A ga-enyocha ihe nkwakọ ngwaahịa tupu iji ya emechaa.Mgbe agba ahụ juru, a ga-ejikọ ya akara akara.
.3gbọ njem 7.3
7.3.1 Uzo eji ebu ugbo gha adi ocha ma di ocha, agaghi agwota ya na ihe ojoo, ihe ojoo, ihe ojoo ma obu ihe ojoo.
7.3.2 Ibu oku na nfe oku ka aga eme, ma gbochie ya, ikpughe ya na mmiri ozuzo n'oge iga njem.
7.4.1 A gaghị echekwa ngwaahịa ahụ agwakọtara na nsi, na-emerụ ahụ, na-emebi ma ọ bụ na-esi isi.
7.4.2 Ngwaahịa kwesịrị ka akara ma chekwaa ya na ebe dị jụụ na nkụ.
Adị ndụ bụ ọnwa 24.
Sophora Japonica Wepụ Kaempferol 50% ntụ ntụ
Sophora Japonica Wepụ Kaempferol 30% ntụ ntụ
Soro anyị kparịta ụka, kwadoro site na LiveChat